Hello Nepal News » ४ हजार वर्षअघि बलेको यो आगो, जुन अझैसम्म निभेको छैन !
४ हजार वर्षअघि बलेको यो आगो, जुन अझैसम्म निभेको छैन !
झट्ट सुन्दा यो कुरा एकदमै हावारी लाग्न सक्छ । तर, यो रोचक यथार्थ हो । तस्बिरमा देखिएको आगो ४ हजार वर्षदेखि लगातार बल्दै आएको छ । र, जुन अझैसम्म पनि निभेको छैन । हो, यो वास्तविकता हो । अजरबैजानको यानार डागको एक पहाडमा बलेको आगो ४ हजार वर्षदेखि निभेको छैन ।
यो ठाउँ ‘आगोको भूमि’ भनेर पनि विश्वभर चर्चित छ । त्यस क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्याँसको भण्डार भएकाले ग्याँस निरन्तर बलिरहेको हो । इतिहासअनुसार पाचौं शताब्दीमा यानार डागमा पुगेका फ्रान्सेली यात्री पार्को पोलोदेखि लेखक अलेक्जेन्डर डुमास समेतले त्यस क्षेत्रमा प्राकृतिक आगोको ज्वाला देखेको उल्लेख गर्दै पुस्तक लेखेका छन् ।
वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट यो पत्ता लागेको छ कि, त्यस क्षेत्रमा ठूलो ग्याँस भण्डार रहेकाले पहाडको छेउमा आगो बल्ने गर्छ । आगो बल्न कसरी सुरु भयो भन्नेबारे चाहिँ विभिन्न भनाइ र मान्यता पनि छन् ।
जस्तो कि, कतिपयले यसलाई दैवी शक्ति मानेर विश्वास गर्दै आएका छन् । जतिसुकै आँधी, हिमपात र पानीले पनि बलिरहेको आगो निभाउन नसक्ने हुँदा त्यहाँ दैवीशक्ति रहेको विश्वास गरिन्छ । यही आगोका कारण अजरबैजानलाई ‘अग्निभूमि’ पनि भनिन्छ ।
आजका मितिसम्म पनि त्यस ठाउँमा बलिरहेको आगोबारे वैज्ञानिकहरूले थप अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । तर, खास नयाँ तथ्य भने पत्ता लागेको छैन ।
प्रकाशित मिति २० माघ २०७७, मंगलवार ०५:५७